Mr Programmer (www.mr-programmer.com): ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးမလုပ်ပါ။
Posted by Mr. Programmer at 3/12/2007 05:44:00 PM
အစ်ကိုကြီး... စိတ်ထဲရှိတာရေးတာပဲ.. ဘာဖြစ်လဲ.. ရေးသာရေးစမ်းပါ။ ဒီလို မြင်ရ၊ ကြားရတာလေးတွေပေါ် မူတည်ပြီး စိတ်ထဲဖြစ်လာတာလေးတွေကို အားလုံးနဲ့မျှဝေပေးတာ ဖတ်ရတဲ့ သူတွေ အဖို့အကျိုးရှိတယ် ထင်တယ်. ညီမတော့ ကြိုက်တယ်. ဆက်ရေးပါ. အားပေးနေတယ်...